China Steel Fabricated CZU fanamboarana sy orinasa | Rainbow
Fampidirana ny vokatra1) Fitaovana: Q195, Q235, Q345, SS400, A36 na ST37-22) Fitsaboana ambonin'ny tany: Galvanis, Paint, fantsom-pandefasana fantsona mainty mainty. trano fandraisam-bahiny, ozinina fiompiana, sup stock-style ...
1) Fitaovana: Q195, Q235, Q345, SS400, A36 na ST37-2
2) Fitsaboana ambonin'ny tany: Galvanized, Paint, bara fantsona malefaka mainty.
4) Fampiharana: zavamaniry indostrialy, trano fambolena, trano fiompiana, trano fivarotana lehibe, efitrano fampirantiana, toerana fanaovana fanatanjahantena, trano heva, famolavolana herinaratra, fotodrafitrasan'ny seranam-piaramanidina, indostrian'ny fananganana, indostrian'ny fiara, indostrian'ny herin'ny masoandro, famokarana milina , pylons vy, tetezana amin'ny sambo, indostria aft miaramila, fanamboaran-dalambe, fitoeran-kaontenera misy ny efitrano milina, mpihazona vokatra mineraly, sns.
Inona ny fizotry ny famokarana CZU fantsom-by mangatsiaka mangatsiaka?
Ny fizotry ny famokarana milina mangatsiaka mangatsiaka indrindra dia mifehy ny fanomanana biletà, ny fanangonana pickling, ny rozika mangatsiaka, ny fanaovana annealing ary ny famaranana.
Ny fanomanana banga dia mitaky fitambarana simika, mizana sy hateviny (fahasamihafana telo-teboka ary fahasamihafana mitovy amin'ny andalana), ary ny fihenan'ny fijaliana dia tokony hahatratra ny fepetra takiana, ary ny faritra dia tokony ho malama ary tsy misy triatra, vala, famonoana, pores, non- fampidirana metaly sns.
Tokony esorina ny vy esorina ary esory ny volo alohan'ny haka amin'ny pickling manaraka. Ny tena tanjon'ny pickling dia ny fanesorana ny ambaratongam-by oxide. Mandritra ny fizotran'ny pickling dia tokony hofehezina ny fifantohana sy ny mari-pana ny vahaolana asidra sy ny atin'ny sira ferrous ao anaty ny vahaolana asidra.
Mba hifehezana ny hatevin'ny endriny sy ny takelaka dia tokony ahitsy ny fihenan'ny hafainganam-pandeha, ny hafainganam-pandeha, ny fihenjanana ary ny endrika mihorona. Ny hateviny dia fehezin'ny AGC, ary ny endrik'ilay takelaka dia voafehy amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny mombamomba ilay horonana (satroboninahitra ary fomba fanonerana satro-boninahitra), toy ny HC, CVC, sns.
Ny Annealing dia mizara ho annealing afovoany ary mamarana ny fanakambana. Ny fametrahana annealing afovoany dia ny fanafoanana ny fanamafisana ny asa, ary ny fampidirana vokatra dia ny fahazoana ny rafitra ilaina sy ny asany. Ny lafaoro fandraketana dia misy lafaoro fandrindrana mifandimby sy fatana fandoroana antsy toy ny lakolosy. Ny fizotry ny fandrindrana ny fatana fandoroana anelanelan'ny lakolosy dia tokony hibaiko ny haben'ny entona miaro ao anaty lafaoro, ny ora fanafanana, ary ny fotoana mangatsiaka; ny fizotry ny fandrindrana ny fatana fandoroana annealing nifandimby dia tokony hifehy ny mari-pana, ny hafainganam-pandeha, ny fotoana ary ny rivotra iainana arakaraka ny fiolahana fanakonana. Fehezo ny fihenjanan-tsolika ao anaty lafaoro mba hiantohana ny endrika lovia, ary fehezo ny satroboninahitry ny lafaoro mba hialana amin'ny fiviliana.
Ny famaranana dia misy ny fisaka, ny fanapahana, ny diloilo ary ny fonosana. Ny fisaka dia afaka manatsara ny endrik'ilay takelaka, manadio ny tampony ary mahazo ireo fiasa ilaina. Ny dingan'ny fisorohana dia tokony hifehezana ny fanitarana ny tadiny, ary ny fanetezana dia tokony hifehezana ny refy sy ny kalitaon'ny haavony, ny menaka dia tokony hitovy, ary ny fonosana dia tokony hameno ny fepetra voalaza, izay manampy amin'ny fitehirizana, ny fitaterana ary ny fandefasana.
C Channel dia mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny milina fanamboarana vy C, izay, arakaraka ny haben'ny C-vy dia afaka mamita avy hatrany ny fizotran'ny famolavolana C
Teo aloha: Serivisy fanamafisam-peo
Manaraka: Hot milentana 55% Al Zn Coil Steel mifono
Cold Profile namorona
Fampidirana beton mitohy